Palladium Hotel dia mahazo fanendrena Certified Center Autism Certified
Home » Lahatsoratra farany farany » Fizahan-tany azo idirana » Palladium Hotel dia mahazo fanendrena Certified Center Autism Certified
Fizahan-tany azo idirana • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Repoblika Dominikana • Zon'olombelona • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Aprily 30, 2018
Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa no toerana farany naleha mba ho lasa Certified Autism Center (CAC) hanampiana ireo vahiny sy fianakaviana manana zaza manana autisme hanana traikefa tsara indrindra. Ireo ray aman-dreny manan-janaka amin'ny otrikaretina autisme dia matetika no mahita fa fanamby ny fialan-tsasatra noho ny filana ara-pihetseham-po, ny famerana ny sakafo ary ny olana ara-piarovana.
Ilay toeram-pialan-tsasatra, miorina ao amin'ny Repoblika Dominikanina saingy mahasarika mpitsidika manerana an'izao tontolo izao, dia nametraka programa fanofanana sy fanamarinana nomen'ny Birao Iraisam-pirenena momba ny fenitra momba ny fampianarana azo antoka (IBCCES). Nandritra ny efa ho 20 taona dia ny IBCCES no mpitarika indostrialy amin'ny fiofanana momba ny autisme ho an'ireo matihanina momba ny fahasalamana nahazo alàlana sy mpanabe manerantany. Nanaiky ny IBCCES fa maro ny fianakaviana manan-janaka manokana mila manana safidy voafetra ary namorona programa manokana ho an'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny sy fitsangantsanganana.
“Ho an'ny Palladium Hotel Group, tena zava-dehibe ny manome tolotra manokana hiantohana ireo hetsika mahafinaritra sy azo antoka ho an'ny fianakaviana, ny ankizy ary ny tanora ary ny fandaharam-pianarana misy sensory ho an'ny fianakaviana. Ny tanjonay dia ny fananan'ny fianakaviana tsirairay fampiononana sy fahatokisana amin'ny fahalalana ny zanany dia karakaraina tsara, na inona na inona filan'izy ireo. Tianay ny hanana fialan-tsasatra tsy hay hadinoina ho an'ny fianakaviana tsirairay, "hoy i Felipe Martínez Verde, Chief Operations Officer-America ao amin'ny Palladium Hotel Group.
Na dia asehon'ny fikarohana aza fa ny fitsangatsanganana dia iray amin'ireo hetsika manentana indrindra ny sain'ny olona amin'ny spektrum, mbola vitsy ny safidy fitsangatsanganana efa voaofana sy voamarina ho an'ireo ray aman-dreny mitady toeran-kaleha afaka mandray ny filan'izy ireo. Ny fikambanana toy ny IBCCES sy ny Palladium Hotel Group dia miasa hanova izany.
“Faly izahay hiara-hiasa amin'ny toeran-kafa tsara iray izay manolo-tena hanompo ireo izay misalahy. Tianay ny mamorona safidy fitsangatsanganana azo antoka sy mifanaraka amin'ny saina ho an'ny ray aman-dreny sy ny olon-tokana, mba hahafahan'izy ireo mitsidika ireo toerana avo indrindra manerantany ary hanana fiadanan-tsaina, "hoy i Myron Pincomb, filohan'ny Birao IBCCES. "Ny fanondroana anay Center Autism Certified dia omena an'ireo fikambanana praiminisitra izay nahavita fiofanana henjana ary nahafeno ny fenitra indostrialy avo indrindra."
Toerana itodiana maro no misafidy ireo safidy "tia autisme"; na izany aza, io teny io dia tsy voatery hanondro ny tena fahazoana ny takiana amin'ireo fianakaviana ireo. Ankehitriny dia maro ny ray aman-dreny mitady toerana hotratrarina nahavita fiofanana mifototra amin'ny fikarohana sy famerenana matihanina mba hahazoana antoka ny traikefa tsara indrindra azo atao. Namorona AutismTravel.com ihany koa ny IBCCES, loharanom-pahalalana an-tserasera maimaimpoana ho an'ny ray aman-dreny izay mitanisa ireo toerana voamarina ary mampifandray ny fianakaviana amin'ny loharanon-karena hafa. Ny toerana alehany rehetra voatanisa ao amin'ilay tranokala dia nihaona tamin'ny takiana Center Autism Certified, izay misy fiofanana momba ny mpiasa marobe ary fanaraha-maso eo an-toerana notontosain'ny manam-pahaizana momba ny autisme. Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa dia ho voatanisa miaraka amin'ny CAC hafa ao amin'ny AutismMember.org, fiaraha-miasa eo amin'ny IBCCES sy ny Autism Society hampifandray ny fianakaviana sy ny olona miaraka amina orinasa sy loharanon-karena nanolo-tena hanompo ny olona amin'ny fantsom-baovao.
Momba ny IBCCES
Ny fanomezana ny fenitra manerantany ho an'ny fiofanana sy ny fanamarinana amin'ny sehatry ny korontana kognitifa - ny IBCCES dia manome andiam-panamarinana izay manome hery ireo matihanina ho mpitarika eo amin'ny sehatr'izy ireo ary hanatsara ny vokatra ho an'ireo olona tompoin'izy ireo. Ireo programa ireo dia ekena erak'izao tontolo izao ho mari-pamantarana lehibe indrindra amin'ny fiofanana sy ny fanamarinana amin'ny sehatry ny autisme sy ny aretin-kozatra hafa. Ao anatin'ny fanoloran-tenanay hizara ireo fanavaozana farany sy fikarohana, ny IBCCEs koa dia mandray ny Symposium Iraisam-pirenena momba ny Fikarohana momba ny kognitika sy ny fikorontanana mba hamoronana seha-piaraha-miasa eo amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria.
Momba ny Palladium Hotel Group
Miorina amin'ny Ibiza any amin'ny Nosy Balearic, PALLADIUM HOTEL GROUP dia orinasa iraisam-pirenena natsangana efa-polo taona lasa izay miaraka amin'ny tanjona hampiroborobo ny nosy any Espana sy eran'i Eropa. Nandritra ny taona maro dia nanamafy ny toerany ho iray amin'ireo orinasa espaniola malaza eran-tany izy. PALLADIUM Hotel Group dia orinasa manana andraikitra malaza izay niezaka mafy nanasaraka ny trano fandraisam-bahiny sy nanangana marika vaovao isaky ny andalana, nitady politika fanitarana tsy tapaka ary fanatanterahana ny fenitra manara-penitra. Amin'izao fotoana izao, ny vondrona dia manana orinasa marobe amin'ny toerana itodiana eran'izao tontolo izao toa an'i Ibiza, Mallorca, Menorca, Barcelona, ​​Madrid, Valencia, Oviedo, Fuerteventura, Tenerife, Córdoba ary Seville any Espana, Sisila any Italia ary ny Maya ary Nayarit Rivieras ao Mexico, Punta Cana ary Santo Domingo any amin'ny Repoblika Dominikanina, Montego Bay any Jamaika ary Salvador de Bahia any Brezila.